Blog of Nyein Chan Yar: 2009
Posted by dathana at Saturday, July 18, 2009 No comments:
Posted by dathana at Sunday, July 12, 2009 No comments:
Posted by dathana at Wednesday, May 27, 2009 No comments:
Posted by dathana at Monday, May 25, 2009 No comments:
Posted by dathana at Thursday, April 16, 2009 No comments:
Posted by dathana at Wednesday, April 15, 2009 No comments:
I don’t know how many new readers found my blog, but spammers found it quickly. Now I’m getting regular spam comments everyday. I will turn on moderation temporarily until I get time to install spam filter plug-in. Anyway… here is something I wrote yesterday rememberingagirl in my heart 15 years ago. :)
ရှိချင်တာရှိ၊ သေချာတာက အသက်ရှင်နေတာ တစ်သတ်မှတ်ထဲ၊ ညည်းငွေ့စရာကောင်းလောက်အောင် ထပ်ပြန်တလဲလဲ dreamt that I'll be always alive with vampiric blood filled heart for you... နောက်ဆုံးမှာတော့ ငါ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားဟာ အဖျားရောၐါ တစ်ခုလို မင်းရဲ နှလုံးသားထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့မယ်။ မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကလည်း ငါ့ရဲ့ သွေးကြောတလျှောက် ထက်ရှတဲ့ အပ်ဖျားလို စိုက်ဝင် စီးဆင်းနေဆဲပဲ။ ချစ်လေးရေ... လွဲမှားခြင်းတွေ၊ ချစ်ခြင်းရဲ့ လှည့်ဖြားမှုတွေ နောက်ထပ် မလိုချင်တော့ဘူး။ ဝေဝေဝါးဝါး ခံစားချက်တွေထဲမှာ ငါပိတ်မိနေတာ ကြာခဲ့ပြီ။ ငါတို့တွေ မေ့လျှော့ပြီး အဆိပ်ငွေ့တွေ ရှူရှိုက်ခဲ့ကြတယ်လေ။ မရေရာခြင်းတွေနဲ့ လုံးထွေးရစ်ပတ်နေတဲ့ နေ့တွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှာ မတွေ့တဲ့ နေ့တွေ၊ များလွန်းလှပြီ။ ငါတို့​တွေရဲ့ ကမ္ဘာမြေ အလှမဲ့လာနေသလား။ ချစ်လေးရေ... ငါတို့ အိပ်မက်တွေကို လက်မလျှော့စတမ်း။ လက်မလျှော့စတမ်း။
Posted by dathana at Tuesday, April 07, 2009 No comments:
Posted by dathana at Wednesday, March 25, 2009 No comments:
Posted by dathana at Saturday, March 21, 2009 No comments:
Posted by dathana at Saturday, March 14, 2009 No comments:
Posted by dathana at Wednesday, March 04, 2009 No comments:
Posted by dathana at Monday, March 02, 2009 No comments: